PPC Brand Campaign - Yakaderera Mutengo, Yakakwira Kudzoka
Chengetedza Mari Yako nePPC Brand Campaign
Muvhuro, Nyamavhuvhu 29, 2011 Muvhuro, October 12, 2015 Chris Bross
Saka urikushanda nebhizinesi mumusika wakazara. Zvingangodaro, izvi zvinoreva kuti iwe urikumirisana nedzimwe dzakanaka dzakadzika mavhareji eCPC emazwi akakosha. Kana kuti pamwe uri muridzi webhizimusi mudiki wemuno, uyo angangoda kupinda mukushambadzira kwepamhepo asi usangonzwa sekunge uine bhajeti rekushambadzira rakakwana kukwikwidza. Sezvo kufarirwa kweinternet uye kushambadzira kwePPC kwakura, saizvozvowo makwikwi, ayo anozoendesa kumusoro mutengo. Usati wafunga kuti PPC haisi kukushandira (kana kusazoshanda, kana usati watanga), funga iyo Brand Campaign.
Mune ruzivo rwedu, vashambadzi vePPC vazhinji vanotanga nekunangisa mazwi akakosha uye ane hukama zvakanyanya nebhizinesi ravo. Kana iwe uri muzvivakwa, iwe uchabhidha pamazwi akakosha senge 'dzimba dziri kutengeswa,' 'tenga imba,' zvichingodaro. Izvi zvinoita zvine musoro, uye ndizvo chaizvo izvo chero Rubatsiro Center kana gwara kuPPC rauchakuudza iwe kuti uite. Ko kana iwo mazwi akakosha achingodhura zvakanyanya kubhajeti rezuva nezuva kana remwedzi raunofanira kushandisa? Nhanho yako inotevera inogona kunge iri yekutsvaga yakachipa isingadhuri mazwi akakosha ekubhidha nawo. Panzvimbo pekuenderera mberi neyangu kune iwo mashoma mashiripiti akadhura-akadhura mazwi akakosha akafanana neanodhura, funga kuvaka mushandirapamwe wakanangana chete nemazita ezita. Ne 'brand brand,' ndinoreva mazwi akakosha anoenderana nezita rako rezita.
Semuenzaniso, isu tinoshandisa yangu yekunyepedzera tii bhizinesi TeaFor2.com uye tinyore mashoma mashoma ane chekuita nezveakakwirisa mazwi akakosha:
Sezvauri kuona, ese mazwi akanyorwa pano mune imwe nzira inoenderana nezita rezita, teafor2.com. Kugadzira Brand Campaigns senge ino inowanzo kuve nzira yakanaka yekuvaka yako brand kuziva, uye kumhanyisa yakabudirira PPC mushandirapamwe wemari shoma pane yaungapedza uchitsvaga anozivikanwa-uye nekudaro anodhura-mazwi akakosha.
Iye zvino zvaunenge uine zano rekutanga kuseri kweBrand Campaigns, heano matipi mashoma ekufunga paunotanga:
wedzera Google Sitelinks kushambadziro dzako muBrand Campaign, kuitira kuti utore vashandisi uenderere mberi saiti yako uye upe zvimwe zvekuwedzera kana shambadziro yako yaonekwa.
Usakanganwa nezvazvo nzvimbo uye kuwedzerwa kwefoni, naizvo. Kunyanya kana iwe uri bhizinesi diki remuno Kuratidza vashandisi chaipo pauri uye nekupa inokurumidza link yekukufonera iwe inogona kubatsira kusimudzira kukanganiswa kweako Brand Campaign kushambadza.
Brand Campaigns yakanakira emabhizimusi emwaka, sezvo ivo vachipa yakaderera-mutengo mushandirapamwe sarudzo iyo inogona kuitiswa gore-kutenderera. Semuenzaniso, kana iwe ukatengesa zvekushambira zvinopihwa, unogona kunge usiri kufarira kumhanyisa kushambadzira kwako pakati pechando apo kutengesa kwako kuri kushoma. Nekudaro, kumhanya neBrand Campaign kuburikidza nemwedzi yese yegore kuchachengetedza zita rako kunze uko, pamwe nekuunza imwe yeiyo isiri-mwaka traffic kana shambadziro yako yemwaka isiri kushanda.
Isu takagadzira mishandirapamwe yemhando kune vazhinji vevatengi vangu, mamwe acho anga achimhanya chete nemazita echiratidzo, uye vamwe vakamhanya neBrand Campaign padhuze nemitambo yechinyakare. Muzviitiko zvakawanda, takaona kuti Brand Campaign yakakunda vamwe nemutengo wakaderera. Iyi inzira huru yekuti vatsva vePPC vapinde mukati vasina kushandisa tani yemari, kana kune vafambisi vepamberi uye vane ruzivo vatariri veacc PPC kumutsidzira account yakaneta.
Tags: muchisokushambadziragoogle adsyakabhadharwa kutsvagapc muchisoppc kushambadzira
Aug 29, 2011 pa 11: 40 AM
Wese munhu anoda kushambadzira chinhu chimwe anofanirwa kuziva kuti vanhu vanowana nemanzwiro avo.Kutanga nazvo, shandisa zvinonetsa muzita rako rekushambadzira kuti ugone kukonzeresa vavariro dzako dzevateereri zvakare ini ndawana WebEnrich anotarisira zvinangwa zvangu zvePPC.